Shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay agagaarka beesha cagaara. – Radio Daljir
Shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay agagaarka beesha cagaara.
Agoosto 15, 2012 8:00 b 0
Gaalkacyo, Aug 15- Inta la og yahay Ganacsada caan ka ah Gaalkacyo ayaa ku dhintay Saddex qof oo kalana? waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa Laanta dusmada iyo beesha Cagaaran ee isla gobolka Mudug.
Allaha u naxariistee waxaa dhaawac ka soo gaaray u geeriyooday? shil gaari oo ka dhacay jidka u dhexeeya magaalada Gaalkacyo iyo beesha cagaaran Ganacsade Hoolif Faarax Dheere oo ka mid ahaa ganacsatada ugu caansan gobolka Mudug.
Shilkan gaari ayaa ka dhashay ka dib markii gaari yar oo maarked ah uu hoos galay gaari nooca xamuulka qaadaa oo ay Soomaalida u taqaan Cago-badanta.
Marxuum Hoolif Faarax Dheere ayaa dhaawacaasi ka soo gaaray shilkaasi ugu geeriyooday cisbitaalka GMC ee Dr Dhaga cade ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Saddex qof oo? oo kale ayaa ku dhaawac-may shilkaasi kuwaasoo qaarkood la sheegayo in dhaawacoodu uu culus yahay, dadkaasi dhaawacmay ayaa dhamaantood saarnaa gaariga yar.
Gudoomiye ku xigeenka 2aad? gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur yare oo wax yar ka dib soo maray halka uu shilku ka dhacay oo la hadlay Daljir ayaa sheegay in ay arkeen gawaaridii isku dhacay oo yaal halkii uu shilku ka dhacay islamarkaana ay socdaan baaritaano ku aadan qaabkii uu u dhacay shilkaasi.
Kal hore ayay ahayd markii sidan oo kale gaari xamuula oo ku dhacay gaari yar taasoo keentay inay halkaasi ku dhintaan 12 qof oo dhamaantoodba saarnaa gaariga yar, dhawaana meel u dhaw magaalada Garoowe waxaa shil gaari sidan oo kale ugu geeriyooday laba saxafi oo caana dhaawacna uu ka soo gaaray Fanaanada Soomaaliyeed Saado Cali Warsame.
Digreeto kasoo baxday xafiiska R/Gaas oo si sharci-daro loogu tilmaamay magacaabida Shariif Shiikh Axmed.